IPL ကို အများအားဖြင့် မိရိုးဖလာ photorejuvenation ကို ရည်ညွှန်းပြီး queen photorejuvenation လို့လည်း ခေါ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အလင်းတန်းလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။500-1200nm မှ လှိုင်းအလျားများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။သူ့ရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ Band coverage ကြောင့် အတိအကျ ပြောရရင် သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရမ်း...
admin မှ 22-05-12 ရက်နေ့တွင်
ကုသမှုအခြေခံများသည် လေဆာအမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းအား ရွေးချယ်ထားသော photothermodynamics ၏နိယာမပေါ်တွင် အခြေခံသည်။လေဆာ၏ လှိုင်းအလျား၊ စွမ်းအင်နှင့် သွေးခုန်နှုန်း အကျယ်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ လေဆာသည် အရေပြား၏ မျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ ဆံပင်၏ အမြစ်ရှိ ဆံပင်မွေးညင်းပေါက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။အလင်းသည်...
808nm Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ၏အသိပညာ
1. 808nm Diode လေဆာကိရိယာသည် မျက်နှာအမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသလား။808nm Diode လေဆာကိရိယာ၏ ထူးခြားကောင်းမွန်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် လည်ပတ်မှုစနစ်၊ မတူညီသောလူမျိုး၊ လူ၊ ကျား၊ မ၊ အရေပြားအရောင်၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကွဲပြားသောအထူများအတွက် လိုအပ်သော သွေးခုန်နှုန်းနှင့် စွမ်းအင်၊
1. Photorejuvenation သည် အဘယ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။IPL သည် အခြေခံအားဖြင့် အရေပြားပြဿနာ နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် အရေပြားအရောင်ခြယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် သွေးကြောချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်သည်။တင်းတိပ်များ၊ အချို့သော melasma ကဲ့သို့သော အရေပြားရောင်ခြယ်ပြဿနာများ၊သွေးကြောချဲ့ခြင်းပြဿနာများ...
diode လေဆာ 808nm 755nm နှင့် 1064nm ကွဲပြားသည်။
စျေးကွက်တွင် မတူညီသော လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားသည့်ကုမ္ပဏီများသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသော တူရိယာများနှင့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုကြသည်။တူရိယာများ၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မူလဇစ်မြစ် ကွဲပြားမှုများအပြင် ထုတ်လုပ်သည့် လေဆာလှိုင်းအလျားများလည်း ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။အသုံးများသော လေဆာလှိုင်းအလျားများမှာ 1064nm၊ 810nm၊ 808nm၊ 755nm...
980 nm diode လေဆာပင့်ကူသွေးပြန်ကြောဖယ်ရှားရေးသွေးကြောဖယ်ရှားရေးစက်
ကုသမှုအခြေခံများ 980nm လေဆာသည် တိကျသောလှိုင်းအလျားတစ်ခု၏ဖိုက်ဘာစွမ်းအင်ကိုလွှဲပြောင်းရန်နိုင်ငံခြားအလင်းဖိုက်ဘာနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး MAX directional conduction မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုကာ ဟေမိုဂလိုဘင်ကိုချက်ချင်းချေဖျက်ကာ tissu မှစုပ်ယူထားသောသေးငယ်သောမော်လီကျူးအစုအဝေးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်...
ND YAG Tattoo Removal Machine မိတ်ဆက်
1. လေဆာက နှုတ်ခမ်းကို ဘယ်လိုဆေးကြောသလဲ။ကြားကာလတိုင်း?အနက်၊ အညို၊ အနီနှင့် အညိုရောင်တို့ကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ 1064nm ထိပ်ပြောင်ခေါင်းကို ဦးစွာဆေးကြောပြီးနောက် 532nm ပြောင်ခေါင်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်ဆေးကြောပါ၊ အနီရောင်၊ အညိုဖျော့၊ အညိုဖျော့ကို 532nm ပြောင်ခေါင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပါ။မှတ်ချက်- နှုတ်ခမ်းလိုင်းများ၊ အရောင်ဖျော့ထားသော နှုတ်ခမ်းများနှင့် နှုတ်ခမ်းနီများ အားလုံးသည်...
1. လေဆာမျက်ခုံးမွှေးဆေးခြင်း၏နိယာမကားအဘယ်နည်း။STELLLE LASER သည် တိကျသော လှိုင်းအလျားတစ်ခု၏ လေဆာသည် အရေပြား၏ ရောင်ခြယ်ထားသော တစ်ရှူးများကို epidermis နှင့် dermis မှတဆင့် ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ရောင်ခြယ်အမှုန်အမွှားများပေါ်တွင်သာ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် အရေပြား၏ epidermis သည် ရှားရှားပါးပါး ပျက်စီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် မပျက်စီးသေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကုသမှုအချိန်သည် ကြီးထွားမှုအဆင့်၊ catagen အဆင့်နှင့် telogen အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။Anagen hair follicles များတွင် melanin ပါသောကြောင့် လေဆာသည် anagen hair follicles များကို အဓိကအားဖြင့် ပျက်စီးစေပြီး ပျက်ဆီးနေသောဆံပင် follicles များတွင် melanin နည်းပါးပြီး t...
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးစားထားသော်လည်း၊ အများအပြားက မေးနေကြဆဲဖြစ်သည်- လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည် မည်မျှထိရောက်သနည်း။မည်သည့်အလှကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကဲ့သို့ပင် သင်၏လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းအပိုင်းကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအချို့ရှိပါသည်။1. အကောင်းဆုံးနည်းပညာကို အခွင့်ကောင်းယူပါ အရေးကြီးဆုံးအရာများထဲမှ တစ်ခု...
Wendy20220318 STELLLE LASER သတင်း
Photorejuvenation Laser နှင့် Intense Pulsed Light Laser အကြား IPL၊ OPT နှင့် DPL ကွာခြားချက် ကွာခြားချက်သည် ဖြာထွက်သည့်အခါ တိကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပျံ့နှံ့မှုနည်းသောအလင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ တင်းတိပ်များကို ကုသရာတွင်၊ လေဆာသည် အရေပြားအတွင်းရှိ melanin ကိုသာ ပစ်မှတ်ထားပြီး ရေကို မထိခိုက်စေပါ...
Radiofrequency application သည် ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်း (ဝင်ရိုးစွန်း) မှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် တစ်ရှူးများ၏ ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းသော အပူပေးစွမ်းသည်။လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် အပိတ်ပတ်လမ်းမှတဆင့် စီးဆင်းပြီး အရေပြားအလွှာများမှတဆင့် ခုခံမှုအပေါ် မူတည်၍ အပူထုတ်ပေးသည်...